Hanti dhowrka qaranka oo baarya shirkadaha qaxootiga shaqada ku haga - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Shirkada etableringslotsar oo hanti dhowrka qaran (Riksrevisionen) baarayo.Foto: Ola Torkelsson/Scanpix.
Hanti dhowrka qaranka oo baarya shirkadaha qaxootiga shaqada ku haga
La daabacay fredag 15 november 2013 kl 14.22
Hanti dhowraha guud ee qaranka ayaa iminka baaraya nidaamka loo yaqano Etableringslotsar oo ah nidaamka hagida qaxootiga dalka ku cusub. Nidamkan ujeeda laga lahaa ay aheyd sidii qaxootiga dalka ku cusub dhaqso loo geliyo suuqa shaqada Iswiidhen, laakiin daraasad hor-u-dhaca oo hanti dhowraha qaran sameeyey ayaa muujinaya in gabaabsi badan ka jiro nidamkan.
Saba Attiya Waxey Iswiidhen imaatey labo sanno ka hor, waxeyna qabtaa in nidaamka hagida (etableringslotsar) uusan gacan ka siinin sidii ay shaqo ku heli laheyd.
– Xilligii ugu horeyey waxa gacanyaro ee ahaa ruux aan ugu gacan siinin shaqo raadinteyda. Waxa keliya ee uu iaga caawiyey waxyaabo yaryar sida buux buuxinta foomamka iyo dacweynta qalaadka, ayey tiri.
Nidamka Etableringslots waxaabadanaa ku shaqeystey shirkado privet ah oo ay tahay in ay ka caawiyaan ruuxa dalka ku cusub sidii uu dhaqso ku geli lahaa suuqa shaqada. Nidamkan ayaa la hergeliyey sannadka markuu ahaa 2010, maantana waxaa jira ku dhawad 280 shirkadood oo arintask u shaqeysta degmooyin badan oo dalka kamid ah.
Laakiin hada heyadda hanti dhowrka guud ee qaran darasada hor-u-dhaca oo ay sameysey ayaa lagu ogaadey in uu nidamkan ka jiro calaamo qaladad ah. Waxaana kamdi ah in waxyaabaha shirkadan Etableringslotsarka ka caawiyaan ruuxa dalka ku cusub aysan badanaa wax xiriir ah la laheyn suuqa shaqada. Alica Selmanovic Monokrousos waxey ka tirsan taahy heyadda hanti dhowrka riksrevisionen.
– Waxaa laga caawiyaa tusaale sidii ay u baxin lahaayeen qaamaha lagu leeyahay iyo la xiriirka laanta caymiska. Waa arin ruuxa dalka ku cusub faa’ido ah baa loo arki karaa laakiin ma ahan wax shaqo geenaya ruuxaas sida ay noo sheegen dad dalka ku cusub oo aan la sheekeysaney, ayey tiri
Darsada hor-u-dhaca ah heyadda hanti dhowrka waxey sidoo kale ku ogaatey in uu jiro xiriir xumo ka dhaxeysa laanta shaqada Arbetsförmedlingen iyo shirkdahan hagayaasha ah. Waxeyn heyadda farta ku fiiqdey in aysan jirin koontorol iyo dabogal lagu smeeyo howlaha shirkadahan hagayaasha qabtaan.
Kontoroolkuna waa muhim in la sameeyo ayey tiri Alica Selmanovic Monokrousos madaama shirkadah privetka ah ee hagayaashu dhaqaalo arbetsförmedlingeen ka helaan.
– Waa muhiim in dowladda ogaato waxa ay lacagta ku baxiso iyo dheefta laga helo. Arinatn ma u shaqeysaa sida ay dowladda iyo arbetsförmedlingen ugu talo galeen in ay u shaqeyso? Ma jirtaa fursado ay ku soo kordhin karto meeleynta dadka dalka ku cusub? Arimahas ayaa jawaabtooda in leys weydiiyo ay muhiim tahay , ayey tiri.
Natiijada ukuur galka heyda hanti dhowrka ayaa la filaayaa in la soo bandhigo bisha jun sannadka fooda nagu soo haya